Yiba Umdayisi We-Bitcoin | Paxful
Thola inzuzo ngokuthengisa i-Bitcoin ku-Paxful usebenzisa izindlela zokukhokha ezingu-350+
Nge-Paxful, qala elakho ibhizinisi ngemizuzu embalwa nje. Sungula okuthengiswayo nge-Bitcoin yakho, beka amamaki enzuzo, futhi wenze amakhasimende ajabule ukuze ukhuphule inzuzo yakho. Bhalisa njengomdayisi namuhla futhi usungule okuthengiswayo kwakho kokuqala.*
Okufanele kokuqukethwe ongakusebenzisela ukuhweba kwakho, okuthengiswayo kanye nezibalo
Bangaphezukwezigidi ezingu-6 abasebenzisi ababhalisiwe emhlabeni
Ithenjwa abadayisi be-Bitcoin ababhalisiwe abangaphezu kuka-12,000
Ukusekelwa okusezingeni eliphezulu ukuze uhwebe ngendlela eshelelayo
Letha i-Bitcoin yakho ku-Paxful futhi uyithengise ukuze uthole inzuzo
Izindlela zokukhokha ezingu-350+
Izindleko zokuthengiselana 0-2%
Ukusekelwa okukhethekile kwabadayisi abathengisa okuningi
Incazelo yokuthengiselana nezinzuzo
Uhlelo lwenxusa luzofaka abadayisi abasha ukuze kukhuliswe ibhizinisi lakho
Hweba ku-Paxful futhi uqale ibhizinisi lakho le-fintech
Intengo yamanje ye-Bitcoin:
1. Sungula noma uthole okuthengiswayo
Ungahlola noma usungule ukuthenga noma ukuthengisa i-Bitcoin. Beka awakho amanani, thola umuntu ozohwebelana naye futhi uthengiselane okokuqala namuhla.
2. Yakha iphrofayela yakho
Thola abathengi ngokuphothula ukuqinisekisa, ukufaka isithombe sephrofayela, nokuqoqa ukuphawula okuhle. Ukuba nomlando omuhle wokuhweba kukhuphula idumela lakho futhi kukusiza wethenjwe abantu abangase babe amakhasimende akho.
3. Hweba futhi uthole inzuzo
Thenga ngenani eliphansi uthengise ngenani eliphezulu. Lokhu kuyisisekelo sebhizinisi elihle futhi sivumelana nakho. Funda okwengeziwe ngezici zokuhweba ku-Paxful esikhungweni sethu sosizo.
Hlala unolwazi, noma nini, noma kuphi
Ungakhathazeki ngokulahlekelwa ukuhweba ongase ukwenze, noma imiyalezo evela kumakhasimende. I-Paxful kulula ukuyisebenzisa futhi isebenza kuwo wonke amadivayisi. Ama-app ethu e-iOS ne-Android, azoqinisekisa ukuthi uhlale unolwazi futhi ukulungele ukusebenza.
Thola inzuzo eningi Ngohlelo Lwenxusa Lwe-Paxful
Uhlelo Lwenxusa Lwe-Paxful lwasungulelwa ukukusiza wandise inzuzo ngokumema abangane bakho, umndeni kanye nabanye oxhumana nabo enkundleni yethu.
Inzuzo Esheshayo Kukho Konke Ukuhweba:
50% wezindleko zakho zeSigaba 1 senxusa
10% wezindleko zakho zeSigaba 2 senxusa zikhokhelwe amanxusa azo
* Uyaqonda futhi uyavuma ukuthi i-Paxful ayihlinzeki ngeseluleko sezomthetho, esentela noma esokutshala izimali, futhi ngokwezinga olibona lifaneleka, uzoxhumana nongoti abagunyaziwe endaweni yangakini ngaphambi kokusebenzisa inkundla ye-Paxful peer-to-peer nokuba umdayisi. Sicela ukhumbule ukuthi indlela okwenzeke ngayo esikhathini esidlule akuyona inkomba yalokho okuzokwenzeka esikhathini esizayo. I-Paxful ayenzi ziqinisekiso noma ezinye izithembiso zokusebenza kwezimali noma imiphumela engase itholwe ngokuba umdayisi we-Paxful futhi uyaqonda uphinde uvume ukuthi zonke izinqumo zokusebenzisa inkundla ye-Paxful peer-to-peer ngezakho ngokuphelele. Uyaqonda futhi uyavuma ukuthi asinakuthweswa icala nganoma iyiphi indlela futhi ngeke nanini singene enkingeni ngenxa yezinqumo zakho. Uyaqonda futhi uyavuma ukuthi ukusebenzisa inkundla ye-Paxful peer-to-peer kanye nokuba umdayisi akuhlanganisi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuhlinzekwa ngeseluleko sokutshala izimali.